Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Ny COVID-19 dia manova ny fahazaran'ny dia italiana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao farany Italia • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny isan'ny olona mandeha amin'ny vina fitateram-bahoaka dia hidina hatramin'ny 22.6 isan-jato aorian'ny fiatoan'ny fahavaratra.
Maherin'ny 50% amin'ireo mikasa ny hanova ny fitondran-tenany no milaza fa areti-mifindra COVID-19 no antony lehibe
Ny fampiasana bebe kokoa amin'ny asa lavitra sy ny fianarana dia manolotra fiovan'ny fahazarana mandeha.
Tonga ny angona vaovao na eo aza ny fandrosoan'ny fampielezana vaksinim-pianakaviana any Italia.
64.66 isan-jaton'ny olona kendrena (na olona 34.9 tapitrisa) any Italia no voatsindrona hery hatramin'ny Alarobia.
Italia Ivon-toerana momba ny statistika (ISTAT) namoaka tatitra androany, mampiseho fa ny Areti-mifindra COVID-19 dia hanohy hisy fiantraikany amin'ny lamin'ny fivezivezena ataon'ny mpiasa italiana sy ny mpianatra mandritra ny volana maro.
"Ny fampiasana bebe kokoa amin'ny asa lavitra sy ny fianarana dia manolotra fiovan'ny fahazarana mandehandeha ho an'ny mpiasa sy ny mpianatra," ISTAT nanoratra tao amin'ny tatitra nataony.
"Raha 80 isan-jato mahery no niova, fara fahakeliny, in-dimy isan-kerinandro talohan'ny areti-mandringana, dia tsy latsaky ny 70 isan-jato no mikasa ny hanao izany amin'ny fihenan-tsasatra mitovy manaraka."
Anisan'ireo mpiasa sy mpianatra voarohirohy tamin'ny fandalinana, maherin'ny 50 isan-jaton'ireo mikasa ny hanova ny fihetsiky ny fivezivezeny no mitanisa ny vonjy taitra voan'ny coronavirus no antony lehibe.
ISTAT naminavina ihany koa ny fiovan'ny fahazarana fitaterana, miaraka amin'ny isan'ny olona miverina amin'ny 22.6 isan-jato aorian'ny fiatoan'ny fahavaratra, raha 27.3 isan-jato talohan'ny areti-mandringana.
Ireo angon-drakitra ireo dia tonga na dia teo aza ny fandrosoan'ny fampielezana vaksinim-pianakaviana any Italia, izay nahitana 64.66 isan-jaton'ny olona kendrena any Italia (na olona 34.9 tapitrisa) voatsindry hatramin'ny Alarobia.
Ny areti-mandringana koa dia hampihena ny fahamaroan'ny dia amin'ny asa sy fianarana, raha ny filazan'ny masoivohom-baovao.
Ny fanadihadiana dia natao tao anatin'ny fanadihadiana natokisan'ny mpanjifa ISTAT tamin'ny volana jolay tamin'ny santionany tamin'ny olom-pirenena 2,000 taona 18 na mihoatra.